အီတလီအစားအစာ၊ မင်းရည်းစားကိုအံ့သြစေတဲ့နည်းလမ်း• musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌စားဖိုမှူး အီတလီအစားအစာ၊ မင်းရည်းစားကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု
လူတစ်ယောက်သည်မိမိလက်ဖြင့်မည်မျှပြုလုပ်နိုင်သည်၊ စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောကောင်းမွန်သောပန်းကန်ကဲ့သို့သူ၏ရည်းစားကိုအံ့အားသင့်စေ။ နှစ်သက်နိုင်ပါသလော။ သူတို့ကတကယ့်ကိုလက်တစ်ချောင်းလောက်ရေတွက်တယ်။
DIY၊ ဆီဆေးနှင့်အခြားဗဟုသုတများစွာ၊ အသိပညာ၊ အာကာသနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရိုးသားစွာလိုအပ်သောအရာများဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ကျန်ရှိနေသမျှမှာမီးဖိုချောင်တွင်အာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့အားလုံးမှာအိမ်မှာမီးဖိုရှိတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာမင်းကကိုယ့်ကိုကိုယ်အလိုလိုက်ပြီးအရသာမဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။
လူသိများအပေါ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်က ချိန်းတွေ့ site ကို ကြီးမားတဲ့လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ်, ငါတို့ကုမ္ပဏီသူတို့ညနေခင်းတွင်ညနေခင်းသုံးစွဲဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာအမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်။ ယောက်ျားအများအပြားမေးခွန်းထုတ်ဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကငါတို့နိုင်ငံဟာအဝေးရောက်စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကော်ဇောခင်းထားတာကြောင့်ငါတို့အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တရုတ်အစားအစာအစားငါတို့ရဲ့ရိုးရာဟင်းချက်နည်းကလက်လျှော့လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအချက်အပြုတ်ထုံးတမ်းစဉ်လာများဖြစ်ခဲ့လျှင်ပြင်ပကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်အသုံးမကျပေ။
လှပသော၌တည်၏ musa.news နေဖြင့်ဆောင်းပါး အီတလီလူမျိုးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအစားအစာကိုအများဆုံးစဉ်းစားကြတဲ့လူတွေဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတာကိုငါတို့ပြောကြတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဆောင်းပါးအတွက်ကျနော်တို့အမေရိကန်တွေဖြစ်လျှင်ငါတို့သည်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က Boot တက်၏နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပြီးဤအပိုငျးတှငျခါးစညျးရှေ့ဖုံးအပေါ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏ alchemy မှဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းထက်, အိမ်တွင်း, လုပ်ဖို့ထက်ပိုမိုကာမဂုဏ်မရှိသော၏ အရသာ။ ကျနော်တို့ဒါလုပ်။ လုပ်နေကြသည်
သင်ချက်ပြုတ်သည့်အခါစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကခဏတာဖြစ်သည် ဖန်တီးမှု အလှဆုံး၏။ ချက်ချင်းပင်ချက်ခြင်းချက်ခြင်းလက်ခံရရှိသည်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျသာယာသောသဘော ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ရလဒ်ကိုမြည်းကြည့်သောအခါ ပို၍ ပင်ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်။
ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုများသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်သင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်အတူတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲအတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တွေးခေါ်တတ်ခြင်းတို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရာဖြစ်လာသည်၊ အိမ်တွင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်လိင်တူချစ်သူစုံတွဲများအတွက်ဘဝစိန်ခေါ်မှုများစွာအတွက်သင့်အားပြင်ဆင်ပေးသည်။
ယခုမူကား, အမှတ်ရကြကုန်အံ့! ဤတွင်တံခါးပိတ်နောက်နှစ်ခုအတွက်ညနေခင်းနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပုံရသောရွေးချယ်ထားသောချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီး, mozzarella နှင့်ပင်စိမ်းနှင့်အတူ Bruschetta
စာရွက်လိုချင်လား? ပေါင်မုန့်, ​​ခရမ်းချဉ်သီး, mozzarella, ပင်စိမ်းနှင့်ဆား။ အရသာအတွက်အမိန့်နှင့်အရေအတွက်, တင်းကျပ်စွာမီးဖို၌! ဒီခဲဖွယ်စားဖွယ်တွေကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်မရှိဘူး။
ကျပ် Sardinian ခရမ်းချဉ်သီး
ဆာဂျင်းခရမ်းချဉ်သီးများသည်ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ ရေနံနှင့် oregano များဖြင့်ပြည့်နှက်ပါကအလွန်ကောင်းမွန်သောသက်သတ်လွတ်စားနိုင်သည်၊ မဟုတ်ပါကသင်မပုပ်နိုင်သောအသားစားနှစ်ခုဖြစ်သည့်ဒိန်ခဲနှင့်ဆလာမီအချပ်တစ်ခုသည်ဤပန်းကန်ကိုကမ္ဘာအဆုံးဖြစ်စေလိမ့်မည်။
Lasagna သည်စိတ်ကျေနပ်မှုပေးသောသင်၏ဟင်းလျာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ချက်ပြုတ်မှုအဆင့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ လက်တွေ့မကျပါကbéchamelနှင့် sheets များကိုစတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးသင်၌လုပ်စရာများစွာရှိသေးသည်။
ပင်လယ်စာသုပ်သည်မတူညီသောကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကိုက်ညီသောအခြားဟင်းလျာများဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းကိုအဆင်သင့်ဝယ်ယူရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်တစ်နေ့လုံးကုန်ဆုံးနိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့! တစ်နေ့လုံး။ ရေဘဝဲ၊ ရေခွံ၊ ပုဇွန်၊ ပြည်ကြီးငါးများနှင့် Clam များတွင်ချက်ပြုတ်သည့်အချိန်နှင့်ပြင်ဆင်သည့်နည်းလမ်းများကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သတိကြီးစွာနှင့်အချိန်များစွာဖြင့်ချဉ်းကပ်ရမည့်ချက်ပြုတ်နည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင်ပိုမိုသုံးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် အတူတူအချိန်နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးစားရန်။
စတော်ဘယ်ရီနှင့်ရေခဲမုန့်နှင့်အတူ Panna cotta
ဒီမှာငါတို့နောက်ဆုံးတော့အချိုပွဲကိုရောက်ပြီ တစ်ခါတစ်ရံမှိုများနှင့်မုန့်များကိုအလိုတော်အတိုင်းလိမ်းရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောချိုမှုကိုမည်သူကခုခံနိုင်မည်နည်း။
ဤချက်ပြုတ်နည်း ၅ ခုဖြင့်သင်ရရှိလိမ့်မည် များစွာသောတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူဖြုန်းဖို့အရည်အသွေးအချိန်သို့သော်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်၊ ပြင်ဆင်ရန်အခြားချက်ပြုတ်နည်းများစွာရှိသည်။
အရှေ့ကမ္ဘာကဒိန်ချဉ်၊ နော်ဒစ်ကဘီယာကိုဘီယာသောက်ဖို့၊ ငါတို့အဘိုးအဘွားတွေအကြောင်းကိုအမေလုပ်ဖို့သင်ပေးခဲ့တယ်။ ဤအစဉ်အလာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထူးခြားသောအရသာများပေးနိုင်သည့်အချဉ်ဖောက်သည့်ကိုလိုနီတစ်ခုအားရှင်သန်ရန်ကတိကဝတ်ရှိသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောမီးဖိုချောင်ဆီသို့ ဦး တည်သည့်နောက်ခြေလှမ်းတစ်ခုမှာထိုစုံတွဲသည်မျှဝေရန်နှင့်ဂရုစိုက်ရန်အတွက်ဘုံ၌တူညီသောအရာတစ်ခုခုရှိခြင်းကိုခံစားစေသည်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အစာစားရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲဖန်တီးမှုအနုပညာအားလုံးနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆောင်းပါးသိပ္ပံပညာအရအသိဉာဏ်ရှိသူတစ် ဦး ၏ဝိသေသလက္ခဏာ ၇ ချက်
ရှေးခေတ်ရောမမြို့၏စားသောက်ပွဲများကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ပါစေ။ ဒါဟာ gastronomic ရှေးဟောင်းသုတေသန၏ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်နိုင်ပါတယ်
9ပြီလ 2020, XNUMX